Miyeey Gudboonyihiin Kuwa Dalkooda Somaaliya Difaacaya iyo Kuwa Danaha Shisheeye ee Imaraadka Difaacaya? (Maqaal) – Radio Daljir
Miyeey Gudboonyihiin Kuwa Dalkooda Somaaliya Difaacaya iyo Kuwa Danaha Shisheeye ee Imaraadka Difaacaya? (Maqaal)
Abriil 26, 2018 4:20 g 0
Dawladnimadu maha wax ciyaar ciyaar ah,kumana timaado sahal.Dawladnimadu waa jirtaanka umadeed oo bulshooyinka caalamku aysan marnaba ka maarmin.Dawladnimadu waa jiritaanka qofeed,midka diineed,midka daleed,iyo midka dhalasho ee loo aqoon sanyahay dal.
Dalaka soomaaliya waa dal uu mudo aad u dheer gumaysi kala qaybiyay oo kala qoqobay. Maskax ahaan ayaa dadka soomaaliyeed loogu yeeshay in laga majaro habaabiyo asalkooda iyo waxay yihiin oo ah qaran soomaaliyeed.Dadka soomaaliyeed waa beelo iyo jilib hoosaadyo ay u sii kalabaxaan.
Hadaba beelnimada iyo jilibyada waa mid qaran walbaa lee yahay,hayeeshee dunidu waa ka hormartay oo waa hore ka gudubtay habka qabaa ilka oo ah mid dib u dhac ah oo aan lagu noqon karayn qaran jira iyo dawladnimo.hadaba waxaa la ogaaday in qabiilnimada iyo jilib hoosaadyada oo laga tagaa ay keenayso in ay abuuranto cudud ka wayn tan beesha dhan tiro,dhan dhaqaale iyo dhan wada jirba intaba.
Dadka oo isu tagaa waxay noqdaan dawlad iyo qaran jira. Dadka soomaaliyeed waa dad wada dhashay oo isleh,af,iyo dhaqan iyo diinba kolkaa suuro galmaha in qabiil dabro oo udiido in ay dawlad noqdaan.wada jirka soomaaliyeed ayaa lagu yahay dawlad.
Afkaarihii gumaysi ee mudo ina haystay waxa uu inooga tagay,dad soomaali inala ah oo dhiigooda iyo lafahooda lagu beeray iyo qalbiyadooda in ay yihiin reer hebel,in ay iska ilaaliyaan lana dagaalamaan in dadka soomaaliyeed sinaado,in uu helo cadaalad,in uu helo dawladnimo,in uu noqdo qaran jira. Arintaan waxay u arkaan in ay iyaga khatar ku tahay markaa had iyo jeer iyaga iyo ilmahoodaba waxay u dardaarmaan in reer hebelnimada la xoojiyo waxaan cidooda ahayna ay la diriraan oo kasoo horjeedsadaan.
Gumaysigu dhib aad uwayn ayuu inagu beeray oo lakala dhaxlay. waxaa jira dad soomaaliyeed oo aan ogolayn in dawlad soomaaliyeed oo mid ah lahelo,waxa jira kuwo aan ogolayn in qaran iyo dawlad soomaaliyeedba lahelo.waxay had iyo jeer jecel yihiin fikradaha shisheeye inay fuliyaan kuna dhaqmaan.
Hadaba waxaa aduunyada ka jirta,in dalwalbaa dadkiisu taageero dawladiisa si kastoo ay u xuntahay kol hadii lays haysto dawlado shisheeye.waayo waxay ogyihiin colaada dhexdooda ah way iloobayaan markii cadawshisheeye lays hayo.waxaana keenaya wadaniyada iyo jacaylka ay jecel yihiin dalkooda iyo dadkooda.
Dawlada maraykanka waxaad ogtihiin in ay dalal farabadan oo dunida ku duushay si gardaro ah,shacab iyo caruur xasuuqday,hadana shacabka maraykanku waa garabtaagan yahay.Ethiopia shacabkeedu waa ku garabtaagan yahay marka soomaaliya lays hayo ama dawlado kale. Emaraatku shacabkoodu waa ku raacsan yahay oo garab taagan yahay dawladooda iyagoo u arka in Soomaalidu khaldantahay oo gardaran tahay,waayo sharafta dalkooda iyo dadkooda la wayn oo waa wadaniyiin.
Inaga soomaalida ah waa leenahay dad wadaniyiin ah oo garabtaagan dawladooda laga soobilaabo 1960 oo aan xoriyada qaadanay ilaa maanta.Laakiin waxaa inagu dhex jira dad gumaysigu badalay oo maskax isticmaarsi ku shaqaynaya,kuwaas oo ah DAWLAD DIID,QARAN DIID, daba dhilif shisheeye. mana doonayaan in ay arkaan soomaali qaran ah dawlad ah oo nool. Dawladeenu waxay difaacaysaa danaha dalkeena soomaaliyeed,sharafkeena dad ahaan iyo dal ahaan,dhaqaalaheena iyo badaheena,shacabka soomaaliyeed iyo wadaniga soomaaliyeed waa ku garabtaagan yihiin arinkaa dawladeena. Laakiin taa waa garanay ee balkawarama ninka siyaasi sheeganaya ee leh soomaalibaan ahay,hadana difaacaya danaha iyo masaalixda shisheeye,waliba shisheeyahaas oo ku soo xad gudbay dawladnimadeena,dalkeena,dhaqaaleheena,wada jirkeena,midnimadeena,iyo karaamadeena qaran ahaan dal ahaan iyo dad ahaanba. kuwa lasafahan cadawgeena shisheeye maanta oo aan aad u jilicsanahay kawarama? kuwa soomaali gumaynaya ee shisheeyaha waynaynaya kawarama?
Dadka nooc ah calaamooyinka lagu gartaa banaankay yaalaan,waxaa kamid ah ma jecla soomaalinimada qabiilay jecelyihiin,majecla dawladnimada,dawlad la aantay jecelyihiin,marwalba iyo had iyo jeer waxay faa niyaan hadaladoodana ay qiimeeyaan oo lawayn shisheeyaha cadawga ku ah soomaaliya. waxay yasaan madaxda soomaalida,madaxda shisheeyaha ayaa la wayn,waxay liidaan aqoon yahanka soomaaliya,waxay buun buuniyaan aqoon yahanada shisheeye,waxay liidaan khayraadka iyo dabeecada dhulka soomaaliya ee barwaaqada ah waxay amaanaan wadamada shisheeye.
Hadalka qofka soomaaliga ah ayaa laxun,hadalka shisheeyaha ayaa la fiican.waa dad qalbiga ka dilan oo cabsi ku nool oo aan isku kalsoonayn,shaqsi ahaan,diin ahaan,dal ahaan,soomaali ahaan, wadaniyadna malaha.aqoon kasta oo uu barto iskuma kalsoona shisheeyaha ayaa lawayn.
Ilaa 1960-2018 waxaa jira dad marka soomaaliya iyo dawlad shisheeye isku dhacaan oo nin walbaa difaacanayo dadkiisa iyo dalkiisa danahooda,dad soomaali ah oo lasafanaya shisheeyaha oo kasoo horjeeda danta dadka iyo dalka ay u dhasheen ee soomaaliyeed.waana wax gumaysigu ku beeray iyagoo awalba u dhashay shaqsiyad xumo iyo garaad gaabni. waxay ku qanacsan yihiin shisheeyaha ay taageerayaan xooga shilimaan ahna siinaya maskaxdana ka haysta. kuwani waa cadawgu uugu wayn ee soomaaliya dawladnimadeeda hortaagan.
Ma arkaysid dad Ethiopian ah oo leh ethiopia waa khaldantahay oo soomaaliya in ay dhulkeeda qabsato oo sheegato waa khalad,in ethiopia ay intii xorta ahayd malabaad hadana fara galiso oo damacsantahay in ay lawareegto waa khalad cid sidan oranaysa oo ethiopia ah majirto. Laakiin Soomaalideena ufiirsada imisaa leh soomaaliya waa gartadarantahay ehtiopia ayaa saxan!!! imisaan hada haynaa leh Emaraatku waa saxan yihiin oo u ah looyaro udoodaya! laakiin mahayno labo qof ama hal qof oo kaliya oo emaraat ah oo leh soomaaliyaa saxan emaaraad waa khaldan yahay.
Waxaa hadaba waxan keenaya waa shaqsiyad xumo iyo wadaniyad la aan. qof waa lahayste iimana malaha,waa qof aduunyada uun hawadiisa iska raacaya oo aan lahayn damiir.wuxuu gadayaa diintiisa,dadkiisa,iyo dalkiisa dana kama laha. hadaba aduunyada kale dadka noocaan ah wadanigaa sifeeyay oo way iska dhameeyeen.
Inagu hadaynu nahay SOOMAALI wali DAWLADIID ayaa inagu dhex nool ah khaainu wadan. waxaa waajib ah in dal iyo dibad la darso ladaba galo la hubiyo dadka aan wadaniga ahayn ee ah dawladiid cadaw ah,waa in la hubiyaa saxaafada dalkeena ka qorta waxa u daran dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena ee inaga hor istaagaya dawladnimadeena soomaaliyeed. waa in aan ogaanaa qofkasta oo inoo dhuumanaya iyo kan muuqdaba oo dabar jarnaa waa waajib.
Ninka lasafta dawlado dawladeena iyo dalkeena kasoo horjeeda wadaniga soomaaliyeed xilbaa kasaaran iyo waajib in uu qofkaas diiwaan galiyo si dalka looga qabto.shacabka ayaa ah kan dalkiisa difaacda waa in aan difaacanaa dalkeena.macno masamaynayso dalkeena ma dawlad aan ku qanacsanahay baa katalinaysa misa dawlad xun,waxaa macno samaynaya in aan dalkeena difaacano garab istaagno dawlada uugu xun haday jirto waayo bari bay iman dawlad fiican ee cadawga dalkaaga iska qabo uugu horayn.
Qofka soomaaliga ah ee shisheeye raacay waa cadawga uugu wayn ee umada soomaaliyeed leedahay. isagaana ka xun dawladaha shisheeye.waxaa hadaba laynaga rabaa inagoo ah dadkii wadaniga ahaa ee dalkaan iska lahaa soomaaliyeed,oo ah dad soomaaliyeed in aan dabar goyno dabadhilifka iyo kuwa inoo soo raaca shisheeye ee ula shaqaynaya si sir ah iyo si muuqataba. waa in wadanigu sugaa cadawga gudaha ee ah dabadhilifka markaas ayaa noqonaynaa soomaali nadiif ah oo qaran jira ah.
Dagaalka aan galayno oo ah mid u dhaxeeya wadaniga soomaaliyeed iyo kuwa u shaqeeya shisheeyaha ee dabadhilifka ah waa mid uu ku gacan sareeyo marwalba wadanigu waayo xaqbaynu ku taaganahay diinteena iyo dalkeena iyo dadkeenaynu difaacanaynaa,dawlad jirtaynu nahay iyo dal jira. ma doonayno qabiil iyo dawlad la aan.
Waxaad aragtaan Muuse biixi sida uu u iibsanayo diintii iyo dalkii,in uu isu dhiibay ethiopia oo lawareegtay dakada barbara iyagoo gabaad ka helaya emaraadka oo ah mid u adeega danaha reer galbeed, ee ku salaysan in ethiopia lagu wareejiyo dakada barbara bar dhamaadka. Muuse biixi waxa uu door biday khaadimid shisheeye iyo sandareero lacageed.waxay dadka uugu sheekaynayaan arimo ganaacsi kuwaas oon meesha ool.afrika waa horay ka ilbaxday in dhulkeeda lagu qabsado qaab ganaacsi kadibna isu roga gumaysi buuxa.kani muuse waaba mid inoo dhimanaa,si uu soomaali isugu diro oo u sii kala fogeeyo ileen waa talada uu siiyo isticmaarsigu yee,waxa uu kolba soo qodayaa qabri muslimiin waa hore aboor wax ka waayay,isagoo laf la ordaya ayuu haween shirinayaa,kolkaasuu wuxuu leeyahay laftan maaragtaan! siyaad baraa dilay waa dadii iyaga yarayd! kolkaasaa dumarkii baroor la suuxaan,dhanka kalana hablihii yaryaraa yoo dalka anfici lahaa oo wadaniyiinta ahaa xabsi buu ku gurayaa.waxaa aad arkaysaan ee ka muuqda muuse mayd dile, waxaa weeye fikir isticmaarsi maha isaga wax maskaxdiisa ka imanaya.
Gunaanad sadex ayaan difaacanaynaa hadii kale nolo sheenu qiimo malaha aduunkaan korkiisa
Dalkeenu waa hal kaliya lamana kala qaadi karo waa dalka soomaaliya difaaco diid kala qoqob
Diinteenu waa islaam suni ah firqo iyo koox gaara iska diid diifaaco iyadaa kugu filan ee
Dadkeenu waa soomaali difaaco kugu filan ee iska diid qabiil iyo jilib hoosaad kufaan soomaalinimadaada.
Hadafkeenu waa dawladnimo iyo soomaalinimo waxaan dabar goynaynaa cidkastoo u adeegaysa shisheeyaha oo inagu dhex jirta maxaa yeelay khatar waynbay ku yihiin jiritaanka iyo madaxbanaanida umada soomaaliyeed.ilaa intii aynu qaadanay xoriyada lagama sifayn marnaba dadkaas dalkeena taasoo ahayd khalad uugalay qaranka soomaaliyeed.madhacdo aduunyada in dadka noocaas ahi ku dhex noolaadan dal xor ah oo leh dawlad. waa wax maanka ka wayn oo lala yaabo qof dalkeenii soomaaliyeed caayaya oo diidan,qof dawlado shisheeye oo aynu is hayno raacsan oo difaacaya inagiina inga soo horjeeda oo ina haligaya,qof shisheeye u shaqaynaya oo dalkiisii khaa imaya hadana horteena ku xaragoonaya oo aan cidiba sidaa u daymoonaynin waa ayaan daro weyn.
Dawladniamdeenii ayuu diidan yahay,midkastoo inoo dhalatay waa hor istaagayaa,hadana waa inagu dhex xaragoonayaa oo is mahadinayaa.suuro galmaha in dawladoon iyo dawladiid wadanoolaadaan dalka waa in mid u haraa waa qasab waxaana u haraya dawlad doon.
Dhibaatada Dawooyinka Kimikada ah ee ay isticmaalan Dumarka (dhegayso)